Computer Technical Notes & Sharing Softwares: 2011
ယူနီကုတ် ကိုလုံးဝ မကြောက်ပါနဲ့၊ သုံးဖြစ်အောင်သုံးလ...
Laptop, Notebook, Netbook ဘာတွေလဲ၊ ဘယ်လို ခွဲခြာြး...
System Unit တစ်လုံးကို Monitor နှစ်လုံးတပ်ဆင်
fire fox ကို hack ခြင်းဖြင် speed10 ဆမြှင်တင်နိုင်...
Gmail, Gtalk ဘယ်အစိုးရကမှ ကြားကနေ ဖောက်မဖတ်နိုင်...
Window system အားလေ့လာခြင်း
Animation Text ပြုလုပ်နည်း
Memory Stick မလို Hardisk မလို 10 Gb free ရမယ်
Posted by SLIP at 8:01 AM0comments
ယူနီကုတ် ကိုလုံးဝ မကြောက်ပါနဲ့၊ သုံးဖြစ်အောင်သုံးလိုက်ကြပါ
Myanmar IT World မှ ကိုလွင်ဇော် တင်ထားသောမြန်မာစာ ယူနီကုတ်များအသုံးပြုဖို့ရာ ခက်ခဲရှိနေသူအားလုံးအတွက် ကိုငွေထွန်း (ကျွန်တော်မသိပါ) ရေးသားထားသော java script များကို အခြေခံကာ မြန်မာ့အိုင်တီဝေါ (Mit world) မှ ယခု ယူနီကုတ်စနစ်အား ယူနီကုတ် သုံးသူ မသုံးသူအားလုံးအတွက် ထုတ်ဝေထားသည်ကို ကျွန်တော် ပြန်မျှဝေပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကိုငွေထွန်းနှင့် မြန်မာ့အိုင်တီဝေါမှ မိတ်ဆွေများကို ဒီနေရာကနေ ကျွန်တော် ခရက်ဒစ် ပေးပါသည်။
စနစ်ကျသော မြန်မာစာစီစနစ်ဖြစ်ရန် အတွက် စနစ်ကျသော စာလုံးများကို အသုံးပြုသင့်သည်။ ထို့အတွက် မြန်မာယူနီကုဒ်စာလုံးများကို အသုံးပြုရလွယ်ကူစေရန် JZ2UFileConverter ကို ရေးသားခဲ့၏။ စနစ်ကျသော မြန်မာစာလုံးများအတွက် တစ်ဘက်တစ်လမ်းက အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
1.ဇော်ဂျီဖြင့်ရေးသားထားသော ဖိုင်များအား ယူနီကုဒ်အဖြစ်ပြောင်းလည်းနိုင်ခြင်း။
2.ယူနီကုဒ်ဖြင့် ရေးသားထားသော ဖိုင်များအား ဇော်ဂျီဖိုင်များအဖြစ် ပြောင်းလည်းနိုင်ခြင်း။
3.Source ဖြင့် Folder ကို ရွေးချယ်ပါက Folder ၏အောက်တွင်ရှိသော ပြောင်းလည်းနိုင်သည့် ဖိုင်များအားလုံးကို ပြောင်းလည်းပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
4.Source ဖြင့် ဖိုင်ကို ရွေးချယ်ပါက ဖိုင်ကို ပြောင်းလည်းပေးမည် ဖြစ်သည်။
5.တဖန် ဖိုင်ကို ရွေးချယ်ရာ၌ ctl+ ဖြင့်ဖိုင်များကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ရွေးချယ်ပြောင်းလည်းနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
1.txt, csv, tsv
2.html, htm, xml
4.java, py, js, php
1.ဒေါင်းလုဒ်ဆိုဒ်မှ ( if you wish to download Click here) Zip ဖိုင်အား ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ယူပါ။
2.ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားသော Zip ဖိုင်အား ပြန်ဖြည်ယူပါ။
3.တွေ့ရသော exe ဖိုင်ကို double click နှိပ်ပါက JZ2U Application Window ကို တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်သည်။
4.ဦးစွာ Source နေရာတွင် ပြောင်းလည်းရန် ဖိုင်များ၊ သို့မဟုတ် ဖိုင်များ၏ နေရာကို ဖြည့်စွက်ပါမည်။ Source ကို သက်မှတ်ရာတွင် Text Box ၏ နောက်တွင်ရှိသော Folder ပုံ ခလုပ်ကိုနှိပ်၍ File Chooser ကို အသုံးပြုနိုင်၏။
5.တဖန် Target နေရာတွင် ပြောင်းထားပြီးသော ဖိုင်များ၏ သိမ်းဆည်းရန် နေရာကို ဖြည့်စွက်ပေးရပါမည်။ File Chooser ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
6.ပြီးလျှင် ပြောင်းလည်းလိုသည့် ပုံစံကို ရွေးချယ်ရပါမည်။ ဇော်ဂျီမှ ယူနီကုဒ်သို့၊ ယူနီကုဒ်မှ ဇော်ဂျီသို့ ရွေးချယ်နိုင်ပေသည်။
7.နောက်ဆုံးတွင် Convert ခလုပ်ကိုနှိပ်ပါကSourceတွင် သတ်မှတ်ထားသော ဖိုင်များကို သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း စာလုံးကုဒ်ပြောင်းပြီး Target တွင်သတ်မှတ်ထားသော နေရာအောက်တွင် အမည်အသစ်ဖြင့် သိမ်းဆည်းပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ဝင်းဒိုး XP, Vista, Window7
Java SE6နှင့် အထက်
ဖော်အဲဗားမှ မိတ်ဆွေများအားလုံး ယူနီကုတ်နဲ့ အတူ မြန်မာစာ စာလုံးများကို အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ အသုံးပြုနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါသည်။
အရေးကြီးသည်က စက်ထဲတွင် Java SE6version နဲ့ အထက် ရှိရန်တော့လိုပါသည်။ သို့သော် မရှိသေးသူများ အောက်ပါလင့်တွင် တိုက်ရိုက် ဒေါင်းယူနိုင်ပါသည်။
လုပ်ရကိုင်ရတာ အသုံးပြုရတာ အဆင်မပြေမှုများရှိပါက တိုက်ရိုက် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော် အတတ်နိုင်ဆုံး ကူညီဖြေရှင်းပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Posted by SLIP at 8:00 AM0comments
Laptop, Notebook, Netbook ဘာတွေလဲ၊ ဘယ်လို ခွဲခြားပြီးတော့ ခေါ်တာလဲ
လက်ပတော့ ဆိုတာက Notebook နဲ့ တူတယ်လို့ ပြောကြပေမယ့် အမှန်ကတော့ တော်တော်ကြီးကို ကွဲပြားပါတယ်။ ထုထည်အရွယ်အစားက အစပေါ့ဗျာ။Portable Computer လို့ ကျနော်တို့ ပြောကြတဲ့ (Laptop, Notebook, Netbook, Tablet PC) အစရှိသည်တို့မှာ... Laptop က ထုထည်ကြီးမားမှု ရှိပြီး .. Performace အရည်အသွေးအားဖြင့် အမြင့်ဆုံးလို့ ဆိုရမယ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခေတ်ထဲမှာတော့ (Laptop နဲ့ Notebook) ကွန်ပျူတာတွေကို အတူတူနီးပါးလောက် ခေါ်ဆို သမုတ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ Laptop ထက် Notebook တွေ ပိုမိုခေတ်စားလာတယ် လို့လဲ ပြောလို့ရပါတယ်။ Laptop တွေ တဖြေးဖြေး တိန်ကောလာခဲ့တာတော့ အမှန်ပါပဲ .......
လက်ပတော့ရဲ့ အရည်အချင်းအချို့ကို ဖော်ပြရလိုလျှင်--
* (၁) ထုထည်ကြီးမားခြင်း (လေးလံခြင်း)
* (၂) Performance ပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်း
* (၃) Upgrade လုပ်နိုင်ခြင်း (လုပ်ရန် နေရာရှိခြင်း) Upgradeable Space.
* (၄) Performance ကောင်းတဲ့အတွက် (ဘက်ထရီ ပိုစားခြင်း)
* (၅) External Device အသုံးပြုစရာ မလိုလောက်အောင် ပြည့်စုံခြင်း
* (၆) ဈေးနှုန်း မြင့်မားခြင်း .. အစရှိသည်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
* (ဥပမာ- PS2 Ports, Serial Ports, VGA Ports .. အပေါက်အစုံပါရှိခြင်း)
အခုခေတ် ကျနော်တို့သုံးနေတာတွေက (Notebook)များပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Laptop လို Device တွေပြည့်ပြည့်စုံစုံ မပါရှိပေမယ့် .. လိုအပ်လျှင် .. External Devices များကို အားကိုးရပါတယ်။ ဥပမာဆိုရလိုလျှင်တော့ .. (Docking Station) လို့ခေါ်တဲ့ ကျနော်တို့ လိုအပ်တဲ့အခါမှာ USB, Serial, VGA, PS2 Ports အစရှိတဲ့ အပေါက်တွေ လိုအပ်လာခဲ့လျှင်.. ၀ယ်ယူသုံးရပါတယ်။ Performace အနေနဲ့ Laptop လောက် Heavy မဖြစ်ပေမယ့် ... Personal သုံးအနေနဲ့က အဆင်ပြေမှုရှိပါတယ်။ (CD/DVD) Drive တွေ ပါဝင်ပါတယ်... ။ Floppy Drive ကတော့ ပါမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး .. လိုလည်း မလိုတော့ပါဘူး။ Laptop ကို ၀ိတ်လျော့ခြင်းဖြင့် .. Notebook ဘ၀သို့ေ၇ာက်ရှိခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Notebook ဆိုတဲ့အတိုင်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါး .. လိုရာ သယ်ယူသွားနိုင်ရင် .. (မှတ်စုစာအုပ်)လို့ တင်စားထားကြတာပါပဲ။
အရည်အချင်း အချို့ကို အကျဉ်းပြန်ချုပ်ရလိုလျှင် -
* (၁) Laptop ထက် ပေါ့ပါးမှု ရှိခြင်း (Portable)
* (၂) ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ .. ပိုမိုခေတ်စားလာခြင်း။
* (၃) Battery အား ရည်ရှည်ခံနိုင်မှု ရှိခြင်း (ဥပမာ- ၄ နာရီ)
* (၄) Ports များ အစုံမပါရှိပေမယ့် .လိုအပ်လျှင် (Docking Station) များ ၀ယ်ယူ သုံးစွဲနိုင်ခြင်း
* (၅) ဈေးနှုန်းသက်သာလာခြင်း .. အစရှိသည်တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ... ဒီ့ထက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်နိုင်ပါတယ်။
--> 1st Generation (Laptop) ---> 2nd Generation (Notebook) ----> 3rd Generation (Netbook) လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ .. လူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်အရ ... Portable ကွန်ပျူတာ.. သယ်ရပြုရလွယ်သော ကွန်ပျူတာ ဆိုတဲ့အတွက်.. .. လူတွေဟာ တီထွင်ကြံဆလာခဲ့ကြတယ်.. ။ ကွန်ပျူတာတွေကို ပိုမိုပြီး သေးသည်ထက် သေးအောင်ပေါ့ ..။ အခုနောက်ဆုံး .. Netbook အထိေ၇ာက်လာခဲ့တာပဲ ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ Netbook လို့ တင်စားလိုက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက.. (ကွန်ရက်)လို့ ကျနော်တို့ခေါ်တဲ့ .. (Internet) ကို အမှီပြုပြီးတော့ .. ခေါ်ဆိုလာခဲ့ကြပါတယ်။ အဓိက .. (အင်တာနက်) နဲ့ Office Application လောက်လေး ကောင်းကောင်းသုံးနိုင်ပြီး.. လိုရာသို့ လွယ်ကူပေါ့ပါးစွာ သယ်ယူနိုင်ပါတယ်.. ။ Netbook မှာ.. (CD/DVD) Drive ပါဝင်မှုမရှိပါဘူး.. သေးငယ်တယ်... ပေါ့ပါးတယ်.. ဆိုတဲ့အတွက်.. Function အစုံရချင်မှ ရမှာဖြစ်သလို..... Performance အရည်အချင်းအရ .. အခြားသော Laptop, Notebook တွေလောက် ကောင်းမှာ မဟုတ်ပါဘူး။။။ အင်တာနက်တော့ ကောင်းကောင်း သုံးနိုင်ပါတယ် .. Wireless Device တွေအဆင်သင့် ပါရှိပါတယ်။ နီးရာ Hotspot Zone, Wireless Zone တွေမှာ အလွယ်တကူ .. အင်တာနက် .. Surf လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အရည်အချင်း အကျဉ်းချုပ် ... ---
* (၁) ပေါ့ပါး သေးငယ်ခြင်း
* (၂) Performance အားဖြင့်. ... (laptop, notebook) တို့လောက်မကောင်းခြင်း
* (၃) Function အစုံမပါရှိသည့်အတွက် Battery သက်တမ်း ကြာရှည်ခြင်း .. (eg:4to5hours)
* (4) Internet, Office Application လောက်သာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
* (၅) ဈေးနှုန်းအားဖြင့် .. (Portable Notebok) လောကမှာ အပေါဆုံး ...... အစရှိသည်ဖြင့်
Tablet PC ဆိုတဲ့အတိုင်း .. စားပွဲတင်ခုံ တစ်ကိုယ်ရေသုံး ကွန်ပျူတာလို့ အမည်ပေးထားပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အဓိက အားသာချက်ကတော့ .. (Monitor) Screen ကို ခေါက်ပြီးတော့ .. စာအုပ်တစ်အုပ်အသွင် .. မှတ်စုများကို (Monitor Screen) ပေါ်တွင် .. Electronic Pen ဖြင့်ေ၇းသားနိုင်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက .. Screen တစ်ခုလုံးကို.. တစ်ပတ်လှည်နိုင်လောက်တဲ့ အထိ လှည့်နိုင်ပြီး .. ခေါက်ချလိုက်နိုင်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့ (notebook တို့ .. Laptop) တို့နဲ့ Functions တွေ နီးပါးလောက် တူညီမှု ရှိပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအရကတော့ .. အပေါ်မှာ ပြောထားတဲ့ Notebook ထက် ဈေးပိုမိုကြီးမားပါတယ်။
အဲဒီလောက်ပါပဲ .. ။ ဒါပေမယ့်.. Portable Computer လို့ ပြောတော့မယ်ဆိုရင် (Pocket PC) လို့ ခေါ်ကြတဲ့ PDA တွေ၊ OS ပါရှိတဲ့ .. Mobile phone တွေက အစ ပါရှိလာပါတယ်။ ဒီခေတ်ထဲမှာတော့ .. နည်းပညာတွေ တစ်ဖြေးဖြေးနဲ့ .. သေးသည်ထက် သေးအောင် ဖန်တီးလာကြပါတယ်။
Posted by SLIP at 8:53 AM0comments
Linux ကိုစတင်လေ့လာမည့် သူများအတွက် သိထားသင့်သည့်အချက် (၁၀)ချက်
ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကို စတင်အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် အလိုအပ်ဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Computer Operating System တွေ များစွာရှိတဲ့အထဲကမှ ယခုနောက်ပိုင်းမှာ လူသုံးများလာပြီး Open Source System တစ်ခုလည်း ဖြစ်တဲ့ Linux Operatin System အကြောင်းကို စတင်လေ့လာမယ့်သူတွေအတွက် မသိမဖြစ်သိထားသင့်တဲ့ အခြေခံအချက် (၁၀)ချက်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အမှန်တစ်ကယ်တော့ Linux ဆိုတာဟာ---
(၁) Operating System တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။
Windows & Mac တို့လိုပဲ Linux ဆိုတာဟာလည်း Operating System တစ်မျိုးသာဖြစ်ပါတယ်။ Operating System ဟာ user application တွေနဲ့ hardware တို့အကြား ကြားခံအလွှာတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ တည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ web browser အသုံးပြုနိုင်တဲ့ operating system တွေဟာ ပိုမိုနေရာရရှိလာကြပါတယ်။
(၂) Windows မဟုတ်ပါ။
ကွန်ပျူတာနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှု မရှိသေးသူတွေအတွက် Windows, Mac နဲ့ Linux တို့ရဲ့ ကွဲပြားခြားနားချက်တွေကို သေချာသတိထားမိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Operating System တစ်မျိုးချင်းစီရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနဲ့ အပြုအမူတွေက တူညီလေ့မရှိဘူးဆိုတာကို အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ သတိပြုထားသင့်ပါတယ်။
(၃) C ဆိုတာ မရှိပါ။
Linux အသုံးပြုသူတွေဟာ ဖိုင်လမ်းကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး /home/USERNAME (အသုံးပြုသူမှ username အဖြစ်သုံးတဲ့နာမည်) ကိုသာ သိထားဖို့လိုပါတယ်။ Home Directory မှာ Documents, Pictures, Music, Video စတဲ့ Directory တွေပါဝင်ပြီး ဖိုင်တွေကို သိမ်းဆည်းတဲ့အခါမှာလည်း home directory ကိုသိရုံနဲ့ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Windows OS မှာဆိုရင် ဆော့ဖ်ဝဲထည့်သွင်းလိုတဲ့အခါမှာ ထည့်သွင်းလိုတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲရဲ့ .exe ဖိုင်ကို double-click ပြုလုပ်ပြီး Install ပြုလုပ်ရပေမယ့် Linux OS မှာ ဆော့ဖ်ဝဲထည့်သွင်းရင်တော့ Ubuntu Software Centre, PackageKit, Synaptic တို့လိုမျိုး Add/Remove Software tool ကိုဖွင့်ပြီး ထည့်သွင်းလိုတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲကို ရှာဖွေကာ Install ပြုလုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၅) Command Line တွေမလိုအပ်ပါ။
Linux ကို စတင်လေ့လာပြီး အသုံးပြုမယ့် သူတွေမေးလေ့ရှိကြတာကတော့ Command line တွေအသုံးပြုရမှာလားဆိုတာပါပဲ။ Linux user တွေအတွက် command line တွေ အသုံးပြုစရာမလိုပါဘူး။ လုပ်ငန်းအတော်များများကို GUI မှ တစ်ဆင့် ညွှန်ကြားခိုင်းစေခြင်းတွေ ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၆) ဗိုင်းရပ်စ်တွေရဲ့ ရန်ကိုလည်း စိုးရိမ်းစရာမလိုပါဘူး။
ကွန်ပျူတာ operating system တွေအတွက် malware နဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေရဲ့ အန္တရာယ်ကို စိုးရိမ်ရလေ့ရှိပေးမယ့် Linux operating system ကို အသုံးပြုသူတွေအတွက်တော့ အဆိုပါ အန္တရာယ်ကို လုံးဝစိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး။
Open Source ဆော့ဖ်ဝဲတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Linux ကိုအခမဲ့လည်း ရယူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Open Source ဆော့ဖ်ဝဲတွေဟာ လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းအတွက်သာမကပဲ တစ်ကိုယ်ရေသုံး ကွန်ပျူတာတွေအတွက်လည်း အသုံးပြုသင့်တဲ့ Operating System တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
(၈) ကြိုက်နှစ်သက်မှုမရှိတော့ရင်လည်း အလွယ်တကူပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Linux အကြောင်းကို စတင်လေ့လာနေသူတွေအတွက် သိထားသင့်တဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ Linux OS ဟာ Windows နဲ့ Mac တို့နဲ့ မတူညီဘဲ အကယ်၍များ လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ Linux desktop ကိုမနှစ်သက်ဘူးဆိုရင် အလွယ်တကူပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူစိတ်တိုင်းကျ ကျွမ်းကျင်သလို အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ operating system တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
(၉) Hardware တွေအားလုံးတော့ အသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။
Linux operating system မှာ hardware စနစ်အားလုံးကိုတော့ အဆင်ပြေစွာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ Hardware တွေအားလုံးတော့ မဟုတ်ပေမယ့် multifunction printer တွေ၊ အချို့ wireless card တွေနဲ့ Laptop display တွေမှာဆိုရင် ၎င်းပြဿနာဟာရှိနေဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
(၁၀) Google ကအကောင်းဆုံးအဖော်မွန်ပါ။
တစ်ကယ်လို့များ Linux ကို အသုံးပြုနေရင်းနဲ့ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပိုမိုသိရှိလိုတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဆိုရင် Google search က အကောင်းဆုံး အဖော်မွန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Google ကနေပြီး Linux နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာ၊ ဗဟုသုတတွေကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Posted by SLIP at 11:50 PM0comments
သင်ဟာ အချိန်တစ်ချိန်ထဲမှာ မတူညီတဲ့ အလုပ်တွေကို လုပ်နေပြီး Program များကိုလည်း အများအပြားဖွင့်ထားတဲ့အခါ Monitor တစ်လုံးထဲကနေ အလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုလျှင် အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ ဒီအတွက် Monitor နှစ်လုံးကို ချိတ်ဆက်ပြီး PC တစ်လုံးထဲတွင် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် Multiple Displays အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး သင်လုပ်ကိုင်နေသော အလုပ်များကို အလွယ်တကူ ထိန်းချုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက် အမျိုးအစားတူညီတဲ့ Monitor နှစ်လုံးနဲ့ Display Adapter လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၁။ Monitor နှစ်လုံးတပ်ဆင်တော့မယ်ဆိုရင် ပထမဦးစွာ သင့်ရဲ့ ကွန်ပျူတာကို Shutdown ချထားပါ။
၂။ ထို့နောက် Monitor နှစ်လုံးကို Display Adapter နဲ့ချိတ်ဆက်ထားလိုက်ပါ။
၃။ သင့်ကွန်ပျူတာရဲ့ စနစ်ကို စတင်ဖွင့်ပြီး Display Setting ချိန်ညှိပေးပါ။
၄။ Desktop ပေါ်တွင် Right Click နှိပ်ပြီး "Window XP" ဆိုလျှင် Properties ကို ရွေးချယ်ပြီး Window
Vista ဆိုလျှင် "Personalize" ရွေးချယ်ပေးပါ။ Display Properties Box ကျလာပါလိမ့်မယ်။ Display Setting
၅။ ဒုတိယတပ်ထားသည့် Monitor ကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ။
၆။ အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုလျှင် Apply Button ကို Click နှိပ်ပြီး OK ကို Click နှိပ်လိုက်ပါ။ Monitor နှစ်လုံးကို
System Unit တစ်လုံးထဲတွင် တပ်ဆင်ပြီး စတင်အသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။
Source by :http://www.onlineictreader.com/
Posted by SLIP at 10:11 AM0comments
fire fox ကို hack ခြင်းဖြင် speed10 ဆမြှင်တင်နိုင်
fire fox ကိုဖွင်လိုက်ပါ add ဘားမှာabout:configကိုရိုက်ထည့်ပါပြီရင်scresh ဘားမှာpip လိုရိုက်ထည်ပါ
network.http.pipelining ကို နှစ်ချက်နှိပ်ပြီ true လုပ်ပေးပါ
network.http.pipelining.maxrequests မှာ4ကို နှစ်ချက်နှိပ်ပြီ3း0ပြောင်းပေးပါ
ဒါတွေကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သူငယ်ချင်းတိုရဲ fire fox ဟာပိုမိုမြန်ဆန်လာစေမှာပါ
WINDOW7User-
network IPv6-capable DNS serversတွင် IPv6 address
မှတောင်းဆိုချက်ရ IPv4 address ဆီသို့ပြန်လည်ကူးပြောင်း
Search Box တွင် network.dns.disableIPv6 ရိုက်ထည့်ပြီး
ရှာဖွေပါ။တွေ့ကနှစ်ချက်နှိပ်၍ True ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။
Caution ;Window XP User is Not Need
ထို့နောက် prefence List box တွင် Right Click နှိ်ပ်ပြီး
New ဆီသို့ရွေ့ကာ Boolean ကိုနှိပ်ပါ။
(APPLE computer User use Ctrl+mouse Click)
ကိုဘောက်တွင်ထည့်ရိုက်ပြီး Ok နှိပ်ပါနောက်ဘောက်တစ်ခုပေါ်
လာက True ရွေးပေးပါ။
များစွာသော Access has been Denied အတွက်ပြင်
prefence List box တွင် Right Click နှိ်ပ်ပြီး
New ဆီသို့ရွေ့ကာ Integer ကိုနှိပ်ပါ။
လာက 750000 ကိုရိုက်ထည့်ပေးပါ။
လာက Ture ကိုရိုက်ထည့်ပေးပါ။
လာက5ကိုရိုက်ထည့်ပေးပါ။
Back နှင့် Forward အတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်သည်။
web pageမှရှိသော Switch အားလုံးအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်သည်။
လာက0ကိုရိုက်ထည့်ပေးပါ။
web pagea နှေင်နှေးမှုအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်
Posted by SLIP at 10:08 AM2comments
Labels: Browser, Hacking
Posted by SLIP at 3:44 AM0comments
Posted by SLIP at 9:49 AM0comments
Gmail, Gtalk ဘယ်အစိုးရကမှ ကြားကနေ ဖောက်မဖတ်နိုင်ဘူး
Gmail ကို အစိုးရရှဲ့ဆာဗာတွေကနေ ဖောက်လို့ရသတဲ့၊ Gtalk ကြီးကိုလည်း အစိုးရက အလွယ်တကူ ၀င်ကြည့်လို့ရသတဲ့နဲ့ မနက်မိုးလင်းလို့ ဆောင်းပါးတစ်ခု ဖတ်လိုက်ရတော့ မှားနေတာ တန်းသိတာနဲ့ မှတ်ချက်တစ်ချို့ပေးလိုက်ပါတယ်..... သူ့စာကို ဖတ်ကြည့်ရသလောက်တော့ ရန်းတုတ်တာ တော်တော်များနေပေမဲ့ ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်တော့ သိတ်မပြောချင်သေးဘူး..... နောက်မှ ဘယ်ဟုတ်မလဲ အဲ့ဒိသတင်းက မဇ္ဇိမ ၀ဘ်ဆိုဒ်မှာ တင်ထားပါတယ်ဆိုမှ အော် သောက်ရမ်း ရမ်းတုတ်တွေပဲဆိုပီး ရေးခဲ့သမျှ မှတ်ချက်ကို ပြန်စုလိုက်ပါတယ်... ပထမဆုံးက မြန်မာပြည်မှာ အင်တာနက်ကိုသုံးရာမှာ Gateway အဆင့်ဆင့်ခံပါတယ်။ မြန်မာပြည်တွင် မဟုတ်ပါဘူး နိုင်ငံတိုင်းမှာ Gateway အဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်။ Gateway ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာ Network ကြီးတွေ ကြီးလာတဲ့ အခါမှာ၊ Sub Net တွေများလာတဲ့အခါမှာ Network တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု Route လုပ်ဖို့အတွက် သုံးရတာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့နက်ဝါ့ ကိုယ့်နက်ဝါ့တွေ ခွဲခြားသုံးတဲ့အခါမှာလည်း Gateway ကို ခံသုံးပါတယ်။ Gateway ဆိုတာ အကြမ်းမျဉ်းအားဖြင့် Router / NAT Devices တွေဖြစ်ပါတယ်။ Hardware / Software နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ အိမ်တွေရုံးတွေမှာလည်း အင်တာနက်လိုင်းကို ခွဲသုံးမယ်ဆိုရင် Router အသေးစားလေးတွေနဲ့ အင်တာနက်ကို ပြန်ခွဲသုံးတာကို အားလုံးလည်း သိကြတာပါပဲ။ နိုင်ငံတိုင်းမှာ Gateway အဆင့်ဆင့်ကနေ သွားပါတယ်....
မြန်မာပြည်က အင်တာနက်ကော်နက်ရှင်အများစုဟာ National Gateway ကနေဖြတ်ရတာလည်း ဟုတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒိမှာ အင်တာနက်ကို သုံးဖို့အတွက် Proxy ဆာဗာတွေကို ဖြတ်ရပါတယ်။ MPT Connection မှာ Proxy Server ခံရပြီး Yatanarpon Connection မှာ Proxy မထည့်ရပဲ Auto နဲ့ သုံးရပါတယ်။ Technical အခေါ်အဝေါ်အနေနဲ့ကတော့ WPAD (Web Proxy Auto Discovery) ဖြစ်ပါတယ်။ Proxy Server များခံရခြင်းရဲ့ အဓိကကတော့ ဖွင့်ပေးခြင်တဲ့ Website တွေ ပိတ်ခြင်တဲ့ Website တွေကို ထိမ်းချုပ်ရန်အတွက် အဓိကဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒိမှာ Gmail နဲ့ Gtalk သုံးတဲ့ စနစ်ကို ကြည့်လျင် https ဆိုတာကို တွေ့ရမှာပါ။ https ဆိုတာ Secure Channel ဖြစ်ပါတယ်။ SSL Certificate ဆိုတဲ့ Encryption တစ်မျိုးနဲ့ ဒေတာတွေကို အပို့အယူ လုပ်ပါတယ်။ Encryption ဆိုတာဟာaလို့ရိုက်လိုက်တဲ့စာကို Encrypt လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ Method ပေါ်မူတည်ပြီး 019275&6%#%@*! ဆိုတဲ့ စာတွေအဖြစ်ကို ပြောင်းသွားပါတယ်။ ဟိုဘက်ကို ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ သူ့ရဲ့ Decrypt လုပ်ဖို့ ကုဒ်နဲ့ ပြန်ဖြည်မှ မူလစာaကိုမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပုံထဲက SSL Encryption အလုပ်လုပ်ပုံကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။
ပုံမှန် ကျွန်တော်တို့ www.google.com လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ရင် http://www.google.com နဲ့ပြောင်းသွားပါတယ်။ ဒါဟာ Pure HTML ပါ၊ ကြားကနေ ဖြတ်ယူကြည့်လို့ရပါတယ်။ အဲ့ဒိအချိန်မှာ mail.google.com ဆိုပီး ရိုက်ထည့်လိုက်ရင် https://mail.google.com ဆိုပီးပြောင်းသွားတာကို တွေ့ရပါမယ်။ အဲ့ဒါဟာ ပုံထဲမှာဆိုရင် အသုံးပြုသူရဲ့ ကွန်ပျူတာကနေ ဂျီမေးလ်ဆာဗာကို Secure Channel သုံးဖို့ Request လုပ်လိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒိအချိန်မှာ Gmail Server ဟာ Encryption လုပ်မဲ့ အဓိက Certificate ကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒိအခါမှာ အသုံးပြုမယ့်သူက အပြန်အလှန် Encrypt/Decrypt လုပ်မဲ့ Key ကိုပေးလိုက်ပါတယ်။ နှစ်ဖက် သဘောတူညီမှု ရသွားတဲ့အချိန်မှာ Encrypted လုပ်ထားတဲ့ စာတွေကိုပဲ အပို့/အယူ လုပ်ပါတော့တယ်။ Encrypt လုပ်ထားတဲ့ စာတွေကို ပြန်ဖြည်တာကတော့ ခုဏက ပို့ထားတဲ့ Key နဲ့ပဲ ပြန်ဖြည်ရပါတယ်။ အဲ့ဒိ Key ဟာ မူလထုတ်ပေးတဲ့ Certificate ကနေလည်း အခြေခံပါတယ်၊ သုံးတဲ့သူရဲ့ ကွန်ပျူတာက နာမည်၊ အချိန်၊ နာရီ စတာတွေကိုလည်း ယူပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် Encrypt လုပ်တဲ့ကီးဟာ တစ်ကြိမ်နဲ့ တစ်ကြိမ်မတူပါဘူး။
အဲ့ဒိအတွက် https သုံးထားတဲ့ ဆိုဒ်တွေဟာ ကြားကဖြတ်ယူလို့ရပေမဲ့ မူလစာတွေကို အဓိပ္ပါယ်ပေါ်အောင် လုပ်လို့မရပါဘူး။ ဆိုလိုချင်တာကတော့ ကြားကဖြတ်ခိုးလို့မရပါဘူး။ ဘယ် ISP (Internet Service Provider) မှလည်း ဖြတ်ခိုးလို့ မရပါဘူး။ အဲ့ဒါတွေကြောင့် မူရင်းဆာဗာတွေကိုပဲ အဓိက ပစ်မှတ်ထားပြီး Hack လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မူရင်း Server Hack လုပ်ခံရမှ အဲ့ Server ထဲမှာ သိမ်းထားတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ခိုးယူလို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ https သုံးထားတဲ့ Connection ကို ကြားကဖြတ်ခိုးလို့မရပါဘူး။ အထူးသဖြင့် Google ကဟာက ပိုဆိုးပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လည်းဆိုတော့ Google's https နဲ့ အခြားသော Business Application တွေကိုပါ Provide လုပ်ထားတဲ့ အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ Google Business Application တွေကိုသုံးထားတဲ့ နာမည်ကြီး အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ Motorola, Konica/Minolta, Land Rover, Virgin America, EPS, Brown University, National Geographic, တို့ဖြစ်ပါတယ်။ အတိအကျစာရင်းကို http://www.google.com/apps/intl/en/customers/ မှာသွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒိအတွက် Google ရဲ့ https ဟာ စိတ်မချရလျင် အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းများ တရားစွဲတာနဲ့တင် Google ဟာ နာမည်ပျက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
https ရဲ့ Security Algorithm တွေကို ဖြည်ဖို့က တော်တော့ကို ခဲယင်းပါတယ်။ Super Computer တွေနဲ့ ဖြည်ထုတ်ရမှာပါ.... ဖတ်ဖူးတဲ့ စာစုတစ်ခုအရ အနည်းဆုံး နှစ် ၁၀၀ ကျော် အချိန်ပေးရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်... အဲ့ဒါကြောင့် CA ကုမ္ပဏီတွေဟာ ယပ်ခတ်ပီး နေနိုင်ပါတယ်.... အဲ့လိုပဲ Certificate တွေမှာလည်း သက်တန်းရှိပါတယ်... သက်တန်း ကြာတဲ့ Certificate တွေကတော့ ဖောက်ဖို့ လွယ်ပါတယ်.... အခု Google Certificate ကတော့ ၂ နှစ်တစ်ခါ လဲတာကို သတိထားမိပါတယ်...
စာထဲမှာ ရေးထားတဲ့ DNS Poisoning နဲ့ အစိုးရက ခိုးတယ်လို့ ရေးထားပါတယ်။ အဲ့ဒါလည်း တက်တက်စင်အောင် လွဲပါတယ်။ DNS Poisoning ဆိုတာ တကယ့် Record အစစ်အမှန်တွေနေရာမှာ အတုအယောင်တွေနဲ့ အစားထိုးတာပါ။ မျက်စိထဲမှာ ထင်သာမြင်သာအောင် ပြောရမယ်ဆိုရင် မောင်ဖြူနေရာမှာ မောင်နီကို အစားထိုးလိုက်တာပါ။ အောက်ကပုံကိုကြည့်ရင် DNS Poisoning အလုပ်လုပ်ပုံကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးပြုသူဟာ www.nicebank.com ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ Poisoning အလုပ်ခံရတဲ့ DNS Server ဟာ တကယ့်နာမည်အစစ်ဖြစ်တဲ့ www.nicebank.com ကိုပေးမဲ့အစား www.n1cebank.com ကိုပြောင်းပလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒိ www.n1cebank.com မှာမှ အသုံးပြုသူ User ရဲ့ပါစ၀ါ့တွေကို ခိုးဖို့ Fake Form တွေ အဆင်သင့်စောင့်နေပါတယ်။ ဖောင်တွေကို ဖြည့်ပီး Submit လုပ်လိုက်ချိန်မှာတော့ ကိုယ့်အကောင့်ဟာ ပါသွားပီဖြစ်ပါတယ်။ ပြန်ယူချင်လို့ မရတော့ပါဘူး။ ဘဏ့်အကောင့်ဆို ငွေအကုန်၊ အီးမေးလ်အကောင့်ဆို ပါ့စ၀ါ့ကိုအပြောင်းခံလိုက်ရပီး Account Hijacked ဖြစ်သွားပါပီ။ ဒါဟာ DNS Poisoning နဲ့ Fake Website ကိုအသုံးပြုပြီး ခိုးတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ် Login ၀င်နေတာ Google ရဲ့ Website ဟုတ်မဟုတ်ကို Internet Browser ရဲ့ Address Bar ကနေ စစ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
အဲ့ဒိမှာ သူပြထားတဲ့ ပုံထဲက ဆာဗာတစ်လုံးဟာ Checking and Capturing the Login Credential ဆိုပြီးပြထားပါတယ် မှားပါတယ်။ https နဲ့သွားတဲ့ Login Credential တွေကို ဖြတ်ပီးခိုးဖမ်းဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အဲ့ဒိဆောင်းပါးပါ အချက်အလက်တွေ တော်တော်လေးလွဲနေပါတယ်။ DNS Port ကိုတော့ ဖွင့်ပေးထားပေမဲ့ MPT Connection ဟာ Proxy နဲ့ ထိမ်းထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့ Proxy Server ဟာ သူ့ရဲ့ DNS ကိုပဲ သွားစစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်ပိုင် DNS Server သုံးပီး ကျော်ခွလည်း မရပါဘူး။
ဂျီမေးလ်အကောင့်အသစ် ဖွင့်ပီး မြန်မာပြည်တွင်းမှာ (မြန်မာပြည်ရဲ့ IP နဲ့ဆို ပိုမှန်ပါတယ်..) သုံးရင် သိတ်မကြာဘူး လော့ကျသွားပီး ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ ဖြည်ရပါတယ်.... ဘာ့ကြောင့်လည်းဆိုတော့ မြန်မာပြည်ကို အကောင့်အသစ်ဖွင့်ခွင့် ပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်.... အဲ့ဒိ လော့ကျသွားတဲ့ အကောင့်ကို ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပြီး ပြန်ဖွင့်လို့ရပါတယ်.... အစိုးရ လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး... Google ရဲ့ Restriction တစ်ခုပါ.... ဒါတွေကိုဖတ်ကြည့်ရင်တော့ အဖြေရှင်းလောက်ပီ ထင်ပါတယ်။ အဲ့ဒိဆောင်းပါးပါတဲ့ အချက်တွေဟာ တော်တော်လေးကို လွဲမှားနေပါတယ်။ အဲ့ဒိအထဲက ကွန်ပျူတာ ပညာရှင်ဆိုတာ လူရွှင်တော်လား မသိပါဘူး။ ကွန်ပျူတာ ပညာကို သေသေခြာခြာ တတ်တဲ့သူတိုင်း၊ https ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံကို သိသူတိုင်းဟာ ဘယ်လိုမှ https ကိုကြားကနေ ဖြတ်ခိုးယူလို့ မရဘူးဆိုတာ အလိုလို သဘောပေါက်နားလည်ပီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒိအတွက် ဘာမှ စိုးရိမ်စရာမလိုပဲ https နဲ့ စစ်မှန်တဲ့ URL (DNS Poisoning) လုပ်ထားတဲ့ လိပ်စာမဟုတ်ရင် စိတ်ချ လက်ချ သုံးနိုင်တာကို အာမခံပါတယ်။
by James Mmt
Posted by SLIP at 6:18 AM0comments
Posted by SLIP at 9:46 AM0comments
Posted by SLIP at 9:47 PM0comments
ကွန်ပျူတာကိုစဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ Motherboard Display Screen ပေါ်လာပြီး နောက် တီဆိုတဲ့ အသံ
တစ်ချက်ကိုကြားလိုက်ရပါလိမ့်မယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ Windows စတင်တဲ့ သင်္ကေတကိုမြင်နေရမှာဖြစ်ပြီး
Windows Sereen ပေါ်လာဖို့အထိ ခဏတော့စောင့်ရပါဦးမယ်။အဲဒီ အချိန် တွေကို Loading time
လို့ခေါ်ပါတယ် ။ ပြီးရင် တော့ တီးလုံးသံလေးနဲ့အတူ Windows ရဲ့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့ Desktop ကို
စတင်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ ဒါကတော့ကွန်ပျူတာ ကိုစဖွင့်လိုက်တာနဲ့ အမြဲလိုလိုမြင်နေရတဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုပါ။
အခု က အဲဒီ မြင်ကွင်းရဲ့နောက်ကွယ် မှာကွန်ပျူတာစနစ်က ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သွားတယ်ဆိုတာလေးကို
Power on ချိန်မှာ Mother Board စတင်အလုပ်လုပ်ပါတယ် ။ အဲဒီအချိန် လေးမှာ Mother Board Settings
ကိုဝင်ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင် F2 ကိုနှိပ်ပါ ဘာညာ စသည်ဖြင့် (Board အပေါ်မူတည်ပြီး Key မတူ) စာလေးနဲ့
ဖော်ပြပါတယ်။Mother Board စတင်တာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် သူက ကွန်ပျူတာ မှာမပါမဖြစ်ပါဝင်ရမယ့် Harddisk
Memory , Keyboard စတာတွေကိုစစ်ပါတယ် ။အားလုံးပြည့်စုံရင် တီ ဆိုတဲ့အသံလေးတစ်ချက်ပေးပြီး
(တစ်ချို့ Board မှာတော့ အဲလိုအသံမပေးပါဘူး) နောက် Hard disk ထဲက Windows OS ကို Memory ပေါ်
ခေါ် တင်ပါတယ်။စစ်ဆေးလို့ တစ်ခုခုလိုနေရင်- Keyboard တို့ Mouse တို့ မပါရင် ကွန်ပျူတာက တိုက်ရိုက်
Screen မှာဖော်ပြပါတယ်။ Memory , CPU ,Hard Disk တို့ဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့ Error Beet အသံပေးပါတယ်။
OS ကို Screen မှာမြင်ရဖို့ခေါ်တင်တာကို Boot လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် ။အဲဒီလို ဆောင်ရွက်(Boot )ဖို့
အတွက် System ထဲက IO.SYS , CONFIG.SYS , MSDOS.SYS, AUTOEXEC.BAT ,NTDETECT.COM
ဆိုတဲ့ ဖိုင်လေးတွေ ကအဓိက လိုအပ်ပါတယ် ။ဒါကြောင့်ဒီဖိုင်တွေဟာ OS ရဲ့အရေးအကြီးဆုံးBoot ဖိုင်တွေ
လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဖိုင်တွေထဲကတစ်ခုခု ချွတ်ယွင်းရင် /ပျက်စီးခဲ့ရင် Windows တတ်မလာနိုင်ပါဘူး။
Start Up လုပ်ငန်းစဉ်မှာ ပါဝင်တဲ့ဖိုင်တွေကိုလည်းရှင်းပြပါဦးမယ် ။
Boot.ini ဖိုင်ဟာ Windows စတင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ Install Control ဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
.ini နဲ့အဆုံးသတ်တဲ့ဖိုင်တွေဟာ Program စစခြင်းအချိန်မှာပါဝင်လေ့ရှိပါတယ်။
Ntldr ဖိုင်ဟာ Boot.ini ကိုဖတ်ပြီး Bootvid.dll ,Hal.dll စတဲ့ အရေးကြီးဖိုင်တွေကိုရှာဖွေမောင်းနှင်ပါတယ်။
နောက်ထပ် ntdect.com ဖိုင်ကတော့ Drives တွေကိုစတင်မောင်းနှင်ဖို့တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပါတယ်။
pagefile.sys က Memory ကိုစစ်ဆေးပြီး OS အတွက်လိုအပ်တဲ့ပမာဏဖန်တီးပေးတဲ့အပြင် App Data
တွေကိုလည်း ထိန်းချုပ်ပေးပါတယ်။Ntbootdd.sys ဖိုင်ဟာ bootcode ကိုDisk ပေါ်မှာထိမ်းသိမ်းပေးပြီး
System နဲ့ Drive တွေ ကြားအဆင်ပြေအောင်ချိတ်ဆက်မှုပြုလုပ်ပေးပါတယ်။
System ဖိုင်တွေလည်းအလုပ်လုပ် Driver တွေလည်း ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့
Windows Display ကို စတင်အသုံးပြုလို့ရပါပြီ။ ပြောရရင် Driver တွေ အလုပ်မလုပ်လည်း System ဖိုင်
တွေစုံရင်Windows ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။အဲဒီလို ဖိုင်တွေ လိုအပ်နေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ Error Message
မျိုးပြတတ်ပါတယ်။ကွန်ပျူတာ စဖွင့်ဖွင့်ခြင်းပြတတ်တဲ့ Error မျိုးဟာ အခုလို မျိုး လိုအပ်တဲ့အခြေအနေတွေ
ကြောင့်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ Error တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
.sys နဲ့အဆုံးသတ်တဲ့ ဖိုင်တွေ ဟာ System ဖိုင်တွေဖြစ်ပြီးအရေးပါ တဲ့ဖိုင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အများအားဖြင့်
Virus တွေဟာ System ဖိုင်တွေကို ဖျက်ပြစ်ခြင်း၊အစားထိုးခြင်းတို့ကိုလုပ်ဆောင်တတ်ပါတယ် ။ Boot.ini
ဖိုင်ကိုVirusက ဖျက်ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင် လောလောဆယ်တော့သုံးလို့ရနေဦးမှာဖြစ်ပေမယ့် နောက်တစ်ကြိမ်
ကွန်ပျူတာဖွင့်တဲ့အခါ Windows တတ်မလာနိုင်တော့ပါဘူး ။ System ဖိုင်တွေကို Drive C: ထဲက Windows
အောက်က system နဲ့ system32 Folder ထဲမှာသိမ်းဆည်းထားလေ့ရှိပါတယ်။ အရေးကြီးဖိုင်တွေကို
ဖျက်လို့မရအောင် Permission ပေးထားလေ့ရှိပြီး အချို့ကိုတော့ မမြင်ရအောင် Hidden လုပ်ထားလေ့
ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လည်း Virus Program တွေကတော့ Force သုံးပြီးဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ကြပါတယ် ။
ဒါကြောင့်လည်း IT နယ်ပယ်ကပညာရှင် တွေကနောက်ပိုင်းမှာ Windows ထက် Linux ကို ပိုမိုထောက်ခံ
Windows စနစ်ကို Hack ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Windows စနစ်အကြောင်းကို သေသေချာချာ ဂဃနဏ
System အကြောင်းကျွန်တော်ရေးပြီးသားတွေလည်းရှိပါတယ်။ လေ့လာကြည့်ပါဦးလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။
Microsoft က Boot မတတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာ အရေးကြီး အချက်အလက်တွေရယူနိုင်ဖို့ Safe Mode ကို
လည်း ထည့်သွင်းဖန်တီးခဲ့ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့်သိပ်အသုံးမ၀င်လှပါဘူး ။ Virus က Safe Mode ကိုလည်း သုံးလို့မရအောင်လုပ်ပြစ်တာ
ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့်ဒီအားနည်းချက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ Hacker တွေဟာPassword ပေးထားတဲ့
ကွန်ပျူတာကို Safe Mode ကနေ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာကြပါတယ် ။ခုချိန်မှာတော့Safe Mode ကနေ
Hack တာမျိုးကိုအိုင်တီနယ်ပယ်ကသူတွေ တော်တော်များများသိ ပြီးသားဖြစ်နေ လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။
System ကို ကောင်းစွာနားလည်ထားပြီး အားနည်းချက်ကိုရှာဖွေထိုးဖောက်နိုင်တာဟာ Hacker တွေရဲ့
တကယ်တမ်းမှာအရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးဖြစ်စေဖို့ ဆိုတာ MotherBoard
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေပေါ်မှာလည်းအများကြီးမူတည်ပါတယ်။Over Clock လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို
Motherboard ပေါ်ကနေ တိုက်ရိုက်ခိုင်းစေပြီး လုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။
Over Clock ဆိုတာကွန်ပျူတာရဲ့ စွမ်းရည်အကုန်လုံး ကိုရနိုင်သမျှ တင်ကြည့်လိုက်တာဖြစ်ပြီးအန္တရာယ်
လည်းများပါတယ်။သတိပြုစေချင်တာကကွန်ပျူတာတစ်လုံးဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် Mother Board ကိုလည်းဂရုစိုက်
ရွေးချယ်ဝယ်ယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်လိုနေရာမျိုးမှာ မီးအားအတက်အကျ နဲ့အပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့
Board ဖြစ်နေဖို့လည်း ပဲလိုအပ်ပါတယ်။
အခုလောက်ဆိုရင်ပဲ Windows System နဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ ကို သာမန်လူတစ်ယောက်ထက်တော့
နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ် ပိုပြီးနားလည်သဘောပေါက် လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။အသိပညာနည်းနည်းလောက်
တိုးအောင် ကူညီ နိုင် ခဲ့တယ်ဆိုရင်ပဲ ရေးရကျိုးနပ်ပါပြီ။
Posted by SLIP at 9:42 PM0comments
Posted by SLIP at 11:43 PM0comments
အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ … ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ..
Credit : http://kaunglaynge.net/2011/11/%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%94%E1%80%85%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7-openoffice-3-0-%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF/
Posted by SLIP at 3:18 PM0comments
Posted by SLIP at 3:46 PM0comments
Posted by SLIP at 10:21 AM0comments
ပုံတွေမှာ Animation Text ထည့်နည်းလေးကို ဒီနေ့ရေးပါမယ်...
ဒီနည်းကို လေ့လာမယ်ဆိုရင် Adobe PhotpShop Software အခြေခံသိထားရင် ပိုကောင်းပါတယ်...
ကွန်ပျူတာကို အသုံးပြုရင်း နည်းပညာများတိုးတက်ကြပါစေ…
ည ၁၀း၅၀ နာရီ
Posted by SLIP at 11:26 AM0comments
Posted by SLIP at 10:19 AM0comments
သိမ်းဆည်းရခက်ခဲနေလား၊ ထားဖို့နေရာတွေ မလောက်တော့ဘူးလား။ ဒါတွေအားလုံးကို ကူညီမှာ ကတော့ Minus.com ပါ။ စပြီး Register လုပ်တာနဲ့ 10 Gb free ရပါတယ်။
ကိုယ့်မိတ်ဆွေတွေကို invert လုပ်ရင်1 Gb စီပေးပြီးတော့50 Gb ထိပေးတယ်။ file တွေ share ချင်လည်းရပါတယ်။ ကဲ ဘယ်လောက်တောင် အဆင်ပြေလည်း Hardisk တို့ Memory Stick တို့ ပျောက်မှာလည်း မစိုးရိမ်ရတော့ ဘူးပေါ့။ လိပ်စာက-www.minus.com
Posted by SLIP at 11:10 AM0comments